Faransa: Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen oo u gudbay Wareegga 2aad ee Doorashada – Kasmo Newspaper
Faransa: Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen oo u gudbay Wareegga 2aad ee Doorashada
Updated - April 23, 2017 11:01 pm GMT
London (Kasmo), Wareeggii 1aad ee doorashooyinkii Madaxweynaha Faransa ayaa la soo gabagabeeyay, waxaana soo baxay 2da musharrax, Emmanuel Macron, Xisbiga “En Marche” ee Bidix-Dhexe iyo Marine Le Pen, Xisbiga midigta fog “Front National”.
Emmanuel Macron iyo Marine-Le Pen waxay ka soo gudbeen wareeggii 1aad iyaga oo ku guulaystay 23.78% iyo 21.53%, sidaasna labadu isku arki doonaan wareegga 2aad ee kala baxa ah 7da May.
Hoggaamiyihii Midigta Jamhuuriga ah, Francois Fillon ayaa durabadiiba guuldarrada qirtay, waxaa ku maqan fadeexaddii lacagaha ee qoyskiisa; waxaa kale oo daadku qaaday musharrixii Hantiwadaagga, Benoit Hamon oo helay 16% oo qur ah.
Waxaa codadkooda dhiibtay in ka badan 47 malyuun oo Faransiis ah (80,9%), iyada oo lagu jiro jawi xasaasi ah, xaalad degdeg ah, qaylodhaan nabadgalyo iyo goobaha codbixinta oo bartilmaameed ah.
Madaxweynaha oo muddada xilkiisu tahay 5 sano waa in uu ku guulaysto aqlabiyad buuxda oo ka badan 50%, wareegga 2aadna waxaa la galayaa 7da bisha May ee foodda nagu haysa.
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa neefi ka soo boodday, waxayna Macron u direen tahniyad loogu hambalyeynayo guusha hordhaca ah, tiro ka mid ah tartamayaashii harayna waxay ballan qaadeen in ay isaga u codayn doonaan.
Dhanka kale taageerayaasha Xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen ayaa ku dabbaaldagaya Henin-Beaumont oo ah Degmadii ay ka codeysay.
Waa markii u horreysay taariikhda dalka oo 2dii xisbi oo waaweynaa, Hantiwadaagga iyo Jamhuurigu ka baxaan saaxadda siyaadda, musharrax an hore loo aqoon, an xisbina lahayn oo si madaxbannaan u tartamayana soo baxo.
Emmanuel Macron wuxuu dhashay sannadkii 1977kii, wuxuuna horey u soo qabtay xilka wasiirka Dhqaalaha iyo Warshadaha, Xukuumaddii Francois Hollande, waana ruug-caddaa ka soo shaqeeyay maamulka Dowladda.
Wuxuu horey uga tirsanaan jiray Xisbiga Hantiwadaagga oo uu ka soo noqday ku-xigeenka Xoghayaha Guud, xilligii xukuumaddii 1aad ee Madaxweynaha xilka ka dagaya Francois Hollande.
Wuxuu xilka iska casilay Agosto 2016kii si uu isugu diyaariyo tartanka jagada Madaxweynaha oo uu ku dhawaaqay Nofembar 2016kii in uu ku gali doono si madaxbannaan, xisbiga “En Marche” oo isagu asaasay April 2016kii.
Macron waa nin u janjeera dhanka Midowga Yurub iyo in albaabbada loo furo soo-galootiga, wuxuuse qabaa in ciddii magangalyo loo diido in degdeg loo masaafuriyo, halka siyaasadda Le Pen tahay mid labadaba si toos ah uga soo horjeedda.
Marine-Le Pen oo aabaheed Jean-Marie L Pen uu asaasay Xisbigeeda Front National waxaa siyaasadeheeda loo arkaa qaar cunsuriyad iyo takoor xambaarsan, waxaana culaysyo ka soo fuuleen gudaha dalka iyo dibadda iyada oo Midowga Yurub kala laabtay xasaanaddii, bishii March.
Dalka ayaa si aad ah ugu kala qaybsamay doorashooyinkan, rabshado kooban ayaa ka dhacay Paris, xiritaankii goobaha codbixinta, Boliiskuna waxay xireen ilaa 29 qof, 9 kalena waxaa soo gaaray dhaawaco kala duwan.